Ingoma Yakho Yomzuzu - Khetha Uphawu
Ingoma Yakho Yomzuzu
Umculo yenye yezona ndlela zamkelekileyo zokubonisa ukuyila kwaye uhlala umi njengentsika yelizwe leemvakalelo zangaphakathi lomntu eliye likhanye. Kanye njengencwadi, okanye umfanekiso osikhumbuza ngomongo weemvakalelo zethu, kunceda iintliziyo zethu ukuba ziqonde ukuba asisodwa kwaye ihlabathi liyabelana ngeemvakalelo zethu, nokuba banokufumana uvuyo okanye ubumnyama kangakanani na. Mhlawumbi akukho nanye imvakalelo owakhe waba nayo engenakwenzeka ukuba uyifumanele ingoma efanelekileyo.
Ukumisela ingoma yakho yelo xesha, sisebenzise iHorary Astrology. Isimboli salo sisikhokelela kwiimvakalelo ezithile, ukuhamba komculo, kunye namandla ebesilindele ukuva. Nokuba ingoma esiyikhethileyo ayikho ncam ikomityi yakho yeti, vala amehlo akho kwaye unikezele ekuhambeni kwayo. Vumela intliziyo yakho ukuba ive into enokuyenza, ukholelwa ukuba iya kukukhokelela apho kufuneka uye khona.
Ukuhlangabezana nesidingo sabo sokuphila ngoku kwaye ufake umbala kumaxesha abo ngamandla nangamandla, Aries abameli kufuneka bazive izinto ngoku, namhlanje, ngaphandle kokulibazisa. Ixesha aliyi kubenzakalisa logama nje bekhulisa iimvakalelo kwiintliziyo zabo ezishushu, yaye kufuneka bakhunjuzwe ngamandla eliwathweleyo. Ingoma yabo yelo xesha Uthando luyaphela yi-OneRiphabhlikhi.
Kubonakala ngathi kukho ukuxhomekeka ekufuneka kuliwe kwihlabathi labaninzi Taurus abameli ngoku, ngokungathi amanzi abo angcoliswe ngamaqhina othando kunye nexesha elidlulileyo. Ukutshona kwihlabathi labo lolonwabo elaziwayo kunye ne-hedonism, baya kuyiqaphela iminqweno yabo ngoko nangoko. Nokuba yintoni na ababambelele kuyo ngokuqinileyo, ingoma elungileyo ehambelana nesimo sabo sengqondo Umsinga wegazi nguEd Sheeran kunye noRudimental.
Omnye wemiqondiso yomntu yezodiac, eyahlulwe kuqikelelo lwezilwanyana kunye nolwethixo, Gemini bonisa ukuba ngumntu nje, kwakhona. Kukho into eyinyani nesekelwe kubume babo obunamandla, ngelixa kwangaxeshanye beyiqonda kakuhle indima, intsingiselo, kunye nomsebenzi obathunyelelwe wona bubomi babo. Umkhombandlela wabo uya kufumaneka kungekudala, kwaye kude kube ngoko, banokulwa isithukuthezi ngengoma kaRag'n'Bone Man. Umntu .
Ehlabathini le Umhlaza abameli, oku kubonakala ngathi lixesha lovelwano kunye nokwabelana ngeemvakalelo kunye nabasetyhini abaye benzakala kwaye batyunyuzwa, abo bawela emngxunyeni wenzondo nomsindo. Oku ayingomandla alula ukuphila ngawo, kodwa kuya kwenziwa kube lula ukuba bafumana indlela yokukhupha kwaye bakhuphe iimvakalelo zabo ezingalunganga. Ukujongana nomsindo ingoma yabo yomxholo ngu Ufanele Uyazi nguAlanis Morissette.
Kukho into enamandla kwaye exhumaxhuma, ezisa ulonwabo kwiintliziyo ze Leo abameli, bazibekele uthumo lokujikela ingqwalasela yabo kwikamva nakwizinto ezilungileyo eziseza. Kufuneka bafumane inyaniso ebandayo kwabanye abantu, kwaye babone isizathu sokuba banqwenele ukuba abanye bahlale ebomini babo, kwaye kutheni abanye kufuneka bashiywe. Ingoma yabo yelo xesha Akukho Kwanto Indibambayo nguShawn Mendez.
I-nostalgic kancinane kwaye kumda weengcinga ezidakumbisayo ngelixa ufuna ithemba kunye nesondlo, yonke into. Virgo kufuneka uqale ukujonga kwicala eliqaqambileyo lezinto kwaye ufunde ukubona ubuhle beli xesha kunye nomlingo emhlabeni. Balawulwa yiMercury kwaye endaweni yokuba babambeke kwinto yoMhlaba, kufuneka bahlale behamba. Ukuyeka ukuhamba kwexesha, kufuneka baphulaphule uMorcheeba Lonwabele ukuHamba .
Nangona Iponti abameli banesidingo seetoni zomculo nezeemvakalelo zomlinganiswa, lo mzuzu ubonakala unemibala yehlabathi yabo ngemfuno enzulu yenkululeko. Ubudlelwane babo kufuneka bugungqiswe, kwaye imfuno yabo yokubonisa umhlaba wabo wangaphakathi ngaphandle koxinzelelo inkulu. Iinketho ezininzi zomculo zinokuhamba kakuhle nesi simo sengqondo, kodwa eyona inzulu kwaye inyanisekile, ngaphandle kwamathandabuzo, Ndifuna ukukhululeka nguKumkanikazi.
Ukuqala ukubuyela kwimvakalelo yombulelo, uxolelo, kunye nokuzola okucothayo kothando, abo bazalwa kuphawu I-Scorpio Kufuneka ukwamkela iimvakalelo ezimbi endleleni. Ukuqonda kwabo intliziyo yabo kuqala apha kwaye ukuba abayikhuphi, igubungela ihlabathi labo leemvakalelo kwaye ibenze bawele ekuzisizeleni. Ukufumana amandla axhasayo kwi-collective, ingoma yabo yelo xesha Ulutsha ngeNtombi.
Intsimi yobudlelwane ibonisa amandla amakhulu omagnetic kwabo bazalwa kumqondiso Sagittarius , kwaye abameli bayo baya kuziva ukuba utsalo oluvuthayo lweemvakalelo kunye nokutsaleleka kumntu omnye, okhethekileyo. Isidingo sabo sothando siyavutha kwaye sidala uxinezeleko kwihlabathi labo, kwaye inkululeko abaqhele ukuyifuna ibonakala ngathi ilahlekile okwangoku. Ingoma yabo yelo xesha Ndiyafuna ukwazi ngooMfene baseArctic.
Lo mzuzu ukhupha yonke into Capricorn Isidingo samava akhethekileyo kunye nolwazi oludlulela ngaphaya kwehlabathi lokwenyani elisingqongileyo. Ubume babo basemhlabeni akubavumeli ukuba bakholelwe kwizinto ezinokwenzeka kunye nezinto ezimangalisayo ezinokuthi le planethi izise indlela yazo, kwaye ezi nkolelo zingalunganga zibabambezele. Ukubuyisela ithemba ezintliziyweni zabo nokubanceda bakhululeke kubulolo, bafanele baphulaphule Ummangaliso ngu-Hurts.
Aquarius Abameli banobuntununtunu ngoku, kodwa baselula kwaye bazolile. Babonakala befumene indlela yokukhulula uxinzelelo kunye nokuxinezeleka, kwaye ngoku bafuna into yokubakhumbuza ngomsinga abanqwenela ukutshona kuwo. Ukuze bahlale bekwimeko ezolileyo yengqondo nentliziyo, kwaye besondla inzondo yabo kunye nobuntu babo, kufuneka baphulaphule Mhm Mhm nguManuel Riva kunye noEneli.
Uphawu lwe IiPisces Ihlala ibonakala idada kwindawo efanelekileyo yokukholelwa eluthandweni, kodwa abafane bafikelele kwinqanaba lokuqonda nabanye abantu okuhlala ixesha elide njengoko bengathanda. Imfuno yabo yokwamkela inyaniso enkulu kuneyomntu omnye ibonakala kakuhle ngokholo abalukhulisayo olungenakuthetheleleka okanye kuxoxwe ngalo. Ingoma yabo yelo xesha nguJohn Mayer Ukukholelwa .
Iponti Aquarius I-Scorpio Virgo Capricorn